China Amphibious Excavator orinasa sy mpamatsy | Bonovo
Drafitra 3D sy firafitra ankapobeny:
Ny mekanisma Spud sy Hydraulika dia tafiditra ao anaty pontoon-bidy nakatona, izay apetraka amin'ny lafiny roa amin'ny excavator amphibious. Ny herin'ny herinaratra dia azo ampiasaina hifehezana ny fametrahana amin'ny toerany na ambony-ambany. Ny halavany dia mamaritra ny halalin'ny faritra iasana. Ny spuds dia atsangana rehefa miasa, avy eo ampidiro ao anaty fotaka amin'ny alàlan'ny mekanika hydraulic. Ny fampiasana spuds dia hanatsara ny fitoniana amin'ny fiasan'ny fitaovana amin'ny rano.
Sary momba ny firafitry ny kodiarana:
Pontoon azo esorina dia midika fa ny elanelana dia azo ahitsy eo anelanelan'ny pontoons roa amin'ny faritra iray. Mandritra ny asa fanamboarana, raha misy ny tontolo iainana tery, ny pontoons eo anelanelan'ny elanelana dia azo ahena kely mandritra ny asa. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny habakabaka dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahamarinan'ny chassis izahay ary manatsara ny fahombiazan'ny asa ataon'ny mpanjifa.
Ny fitaovana Pontoon dia vita amin'ny akora manokana AH36 sambo ary firaka alimina 6061T6 misy fitaovana matanjaka be. Ny fitsaboana anti-harafesina dia mandray teknolojia sandblasting sy shot-blasting, izay manatsara ny fiainana fampiasana.
Famolavolana firafitra mirindra sy voafetra
Ny fizahana singa amin'ny fanandramana manimba eo an-toerana dia miantoka ny fahafaha-mitondra sy ny fiarovana ny Pontoon.
Famolavolana rojo 3: Rehefa avy nampiasaina nandritra ny fotoana maharitra ilay rojo, dia hitombo ny pitch noho ny fanaovana bus pin, izay hahatonga ny rojo iray manontolo ho lava kokoa ary hiteraka fandatsahana rojo na malama rehefa mandeha. Hisy fiatraikany lehibe amin'ny fandidiana izany. Ny fitaovana mihenjana dia afaka miantoka ny tsimatra amin'ny rojo sy ny nify mitondra fiara amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny toeran'ny sprocket. Ny fanamafisana ny bolt dia fanaingoana mahazatra ny pontoonantsika. Ny fanamafisana ny varingarina dia mora kokoa noho ny fanamafisana ny bolt, izay afaka manao fanitsiana mandanjalanja ary miantoka ny fandehanana mafy kokoa sy mahomby.
Fandramana fitsapana sy fitiliana asa maro - paompy mandeha lavitra & dredging
- Fanesorana ny tany honahona any amin'ny faritra fitrandrahana, fambolena ary fanamboarana fanarenana sy fanarenana ny tany mando
- Fisorohana sy fanaraha-maso ny tondra-drano Tetikasa fanodinkodinanan'ny rano Fanovana ny tanin-saline sy ny tany ambany-vokatra Fanitarana ny lakandrano, fantsakan-drano ary vavan'ny rano amin'ny fanadiovana ny farihy, morontsiraka, dobo ary ony
- Mandavaka hady ho an'ny fametrahana sy fametrahana fantsona solika sy gazy
- Fanondrahana rano
- Fananganana ala sy fikolokoloana ny tontolo iainana voajanahary
Fampidirana sy fandefasana kaontenera: Manao drafitra fandefasana entana mahomby izahay hitehirizana ny vidin'ny fandefasana entana.
Ny kaontinao dia horaisina amin'ireto fomba fiasa ireto
Teo aloha: Track Shoe
Manaraka: BONOVO Medium Digger xcavator Masinina mihetsika amin'ny tany ho an'ny fihadiana
excavator amphibious ampanofaina
excavator amphibious amidy
mpanamboatra excavator amphibious
vidin'ny excavator amphibious
Mpihady amphibious eik
excavator buggy swamp
excavator honahona amidy